Fiendrika mañano - Wikipedia
Ny fiendrika mañano dia fiendrika ahitana matoanteny ao amin'ny fehezanteny manana lazaina mpanao asa na lazaina manana ilay toetra resahina ao amin'ny matoanteny entimilaza (na vara). Ny fiteny rehetra dia ahitana io fiendrika io.
Fiendrika mañano ao amin'ny fiteny malagasyHanova
Ao amin'ireo fitsipiteny malagasy tranainy izay nalaina tahaka amin'ny fitsipiteny an'ireo fiteny eoropeana (fiteny anglisy sy frantsay) dia iray amin'ny fiendrika na fitodika roa na telo fantatra ny fiendrika mañano. Raha amin'ny filazam-potoana ankehitriny ny matoanteny dia matetika manomboka amin'ny tovona m-.
Tsy mampiasa ny andian-teny hoe "fiendrika mañano" na "fitodika mañano" ny mpanoratra ny haiteny araka anjara asa momba ny fiteny malagasy. Ao amin'ny haiteny araka anjara asa, izay nanitsy ny heverin'ny mpanoratra azy ho zavatra tsy mahafa-po tao amin'ireo fitsipiteny malagasy tranainy, ny izay tokony ho ao amin'ny fiendrika mañano dia voatsinjara ao amin'ny fitodika maro, dia ny fitodika mpanao sy ny fitodika sehatra, ary manampy azy ireo ny fitodika mpampanao sy ny fitodika mpifanao.
Ao amin'ny fitsipiteny ara-piofohana, izay nanitsy ny heverin'ny mpanoratra azy ho zavatra diso tao amin'ny fitsipiteny araka anjara asa, dia mahaleo tena ny fiendrika mañano sady tsy mahakasika afa-tsy ny matoanteny, ka mitsinjara ara-kevitra amin'ny fitodika atao hoe "fototra", dia ny fitodika mihatra, ny fitodika tsy mihatra, ny fitodika mamoatra ary ny fitodika mitoina. Marihina fa tsy mitovy amin'ny hoe fiendrika (izay tsy mahakasika afa-tsy ny endri-teny) ny fitodika (izay momba ny hevi-teny).
Fiandrika mañano ao amin'ny fiteny hafaHanova
Ny fiendrika na fitodika mañano dia mifamaly amin'ny fitodika anoina na iharana ao amin'ireo fiteny hafa araka ny ampianarin'ny fitsipiteny an-tsekoly sy araka ny fiheverana mbola tanan'ireo mpahay teny maro.
Frantsay: Le chat mange la souris. ("Mihinana ny voalavo ny saka")
Anglisy: The cat eats the mouse. ("Mihinana ny voalavo ny saka")
Latina: Feles murem edit. ("Mihinana ny voalavo ny saka")
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiendrika_mañano&oldid=977094"
Dernière modification le 18 Novambra 2019, à 09:45
Voaova farany tamin'ny 18 Novambra 2019 amin'ny 09:45 ity pejy ity.